10 Days Switzerland Travel njegasi | Save A Train
Home > Travel Europe > 10 Days Switzerland Travel njegasi
(Emelitere ikpeazụ On: 31/12/2019)
Omiiko njem mara na ọ dị mkpa na-enwe ezi njegasi. Na a ọma lee anya na map, a siri ike atụmatụ nke njem, na ọtụtụ ihe, ebube na-eme - na ị na-setịpụụrụ gị 10 ụbọchị Switzerland njem. Na mgbe ị na-eme njem site Europe, a ụgbọ okporo ígwè nwere ike na-gị fọrọ nke nta n'ebe ọ bụla. Ndị chọrọ explorre Switzerland mkpa nwere a plan n'ihi na mba na-juru n'ọnụ na breathtaking nlegharị anya. Ọ bụrụ na ị chọrọ enyemaka ma ọ bụ mmụọ nsọ na-abịa na nke gị, ka nwere a anya 10 ụbọchị Switzerland njem njegasi:
Day 1 of Your 10 Days Switzerland Travel njegasi – Geneva
The ebe ị na-amalite gị njem ịdị iche iche, kama ịtọ ụda ihe ndị ọzọ na ọnụnọ gị. Ọtụtụ ndị njem nwere ike ikwu malite na ma Geneva ma ọ bụ Zurich n'ihi nnukwu obodo ndị njem n'ógbè nlekọta ọrụ. Ihe bụ ihe ọzọ, i nwere ike na-agbalị a njegasi backward ma ọ bụrụ na ị ga-amasị - ihe bụ ihe dị mkpa bụ ka nwere fun!
Ọ bụrụ na ị na adaa n'ime Geneva mbụ, e nwere otu ìgwè nke ihe ndị na-ahụ na gị na mbụ ụbọchị na Switzerland. Anyị na-akwado ya agaa leta ndị Old Town na City Center. Ọzọkwa, na Treille eme mkpagharị na United Nations oche na- oké nlegharị anya.
Lyon na Basel Ụgbọ oloko
Paris na Basel Ụgbọ oloko
Lucerne na Basel Ụgbọ oloko
Malite na Geneva na-enye gị ohere pụrụ iche na-arapara gburugburu Lake Geneva a obere ogologo. N'ihi na ụbọchị nke abụọ na Switzerland, ọ ga-abụ ezigbo ileta obodo nke Montreux, ọkụkọ nso ọdọ.
Ọ bụ naanị a obere ụgbọ okporo ígwè n'ebe Geneva, na na ọ bụ kwesịrị ịhụ. Ihe bụ ihe ọzọ, ndị hụrụ ya n'anya ochie castles ga-enwe obi ụtọ site Chateau de Chillon, na ọdịdị hụrụ ga-doro anya na enwe ọdọ.
Anọkọ na Switzerland enweghị ịhụ eke mara mma nke The Alps ga-adị ka ebe a Gọọmet restaurant na bụghị ịtụ nri ọ bụla. Na ọ dịghị ihe mere na-atụ uche ya mgbe ihe n'isi ụtụtụ ụgbọ okporo nwere ike na-gị Zermatt. site n'ebe, gị njem na Alps nwere ike na-amalite.
E nwere ọtụtụ ihe ha na Zermatt ma ọ bụrụ na ihu igwe dị mma ezu. Anyị na-akwado na 3-hour ibugo onu gburugburu ise ọdọ mmiri, malite na Blauherd. Ọ bụ a mara mma ibugo onu na a oké ụzọ na-amalite gị Alps ahụmahụ.
Day 4 – Zermatt – Ọzọ On Day 4 of 10 Days Switzerland Travel njegasi
I nwere ike na-gị anọ inyocha Zermatt n'ụzọ zuru ezu, dị ka nke a bụ otu n'ime ndị maa mma Swiss ugwu obodo. E nwere a ebube osimiri iji hụ, na Matterhorn ele. Ọ bụrụ na ị na-na na a ọzọ nwere ahụmahụ onye ji, nwere ike ime n'ehihie ịhụ Charles Kuonen Suspension Bridge.
n'ihi na, ị ga-mkpa ịga Randa, ebe ibugo onu na akwa na-amalite. Ọ bụ ihe a 2-hour ibugo onu na akwa. Ọ bụghị ihe dị mfe nzọ mezue, na akwa ya onwe ya bụ bụghị maka gwụrụ nke obi. Otú ọ dị, ịhụ ọ bụ uru nsogbu.
Basel na Bern Ụgbọ oloko
Day 5 – Matterhorn glasia
Iji n'ụzọ zuru ezu na-enweta Alps, ị ga-ewere ohere banye elu karị. Zermatt bụ oké amalite na, dị ka ị pụrụ mfe iru ma Matterhorn glasia Paradise na Gornergrat si n'ebe.
Ọ na-ewe ụfọdụ lifts iru n'elu nke Matterhorn glasia Paradise ma ọ bụ ụgbọ okporo ígwè na-agba ịnyịnya Gornergrat. ma ndị a ụbọchị njem na-enye mma echiche nke Alps, na e nwere ihe ụfọdụ ịgagharị ime ozugbo ị na-na na e, oke.
Basel ka Chur Ụgbọ oloko
Bern ka Chur Ụgbọ oloko
Turin ka Tirano Ụgbọ oloko
N'ihi na n'ụbọchị nke isii nke gị Switzerland njegasi, ọ bụ oge iji jide ụfọdụ ndị ọzọ ikpọ echiche si Schilthorn. Enwetaghị a cable ụgbọala Schilthorn si Murren na-enwe ihe niile o nwere na-enye. A n'usoro restaurant, ọtụtụ ikiri nyiwe, na ọbụna Bond World nile pụrụ ịchọta ebe a.
Schilthorn bụ iji dejupụta dum ụbọchị, ma ọ bụrụ na ị na-enwe adventurous, lelee Lauterbrunnen nakwa. Ọ bụ a ibugo onu site a ọmarịcha ndagwurugwu jupụtara obere obodo akwụsị na echiche nke ugwu waterfalls.
Day 7 ga-zuru okè maka prolonging gị nleta Jungfrau region na na-na ịgagharị Alps. E nwere ụfọdụ ndị na-ewu ewu hiking ụzọ ụkwụ nwere ike ime site na Grindelwald. A USB ụgbọ ala nwere ike na-ị na-akpa Mountain, ebe ị nwere ike họrọ otu n'ime ọtụtụ ndị dị hiking ụzọ ụkwụ.
Otu n'ime ndị kasị ewu ewu na ndị bụ doro anya na Bachalpsee Lake ibugo onu, nke bụ a gburugburu na njem na-ewe gburugburu 2 awa. Otú ọ dị, e nwere ọtụtụ ihe omume ndị ọzọ mbụ, wee jide n'aka na ịbịa na ebe ọma.
The isi n'ihi na gị ụbọchị nke asatọ nke 10 Days Switzerland Travel ịgagharị nwere ike ịbụ Wengen, a obere ugwu obodo. Mgbe na ebe, ị pụrụ inyocha Mannlichen site na-ewere a cable ụgbọ ala elu ugwu na hiking na ụzọ ụkwụ. E nwere ụfọdụ intriguingly aha ya bụ ndị, dị ka Royal Walk.
The Panorama nzọ ụkwụ si Mannlichen ka Kleine Scheidegg bụ eleghị anya kacha mma anyị hụtụrụla otu. ọ na-enye echiche nke ndagwurugwu n'okpuru na atọ ama ugwu - na Jungfrau, Monch, na Eiger. Site Kleine Scheidegg, iri a ụgbọ okporo ígwè azụ Wengen.
Nso na njedebe nke gị 10 Days Switzerland Travel njegasi, ị ga-achọ ime ka ụzọ gị azụ n'ime obodo. Maka 9 ụbọchị, anyị nwere ike ikwu a nleta Lucerne, dị ka ọ bụ nke zuru okè obodo inyocha on ụkwụ. Mgbe niile hiking, ọ na-aga ịbụ a na-emeso ka agagharị na n'okporo ámá na search of nlegharị anya dị ka ndị Church of St. Leodegar, Museggmauer na Lion Ncheta.
Lucerne nwere oké Riverfront na ọtụtụ mara mma akara. Ọzọkwa, ọ bụ nnukwu stop gị njem Zurich, ebe ị ga-agwụcha gị nleta.
Day 10 – Zurich na ụbọchị ikpeazụ anyị nke 10 Days Switzerland Travel njegasi
Your ikpeazụ ụbọchị kwesịrị a full otu, na Zurich bụ ezigbo ebe-eji ya na. Jiri oge ịhụ ya ọtụtụ akụkọ ihe mere eme nlegharị anya, dị ka ụka nke Grossmunster na Fraumunster.
Zurich na-nwere ya ama shopping n'okporo ámá na-enye, wee jide n'aka na ị zụrụ ihe na Bahnhofstrasse. Na-eje ije site na Old Town na-enwe ịgagharị tupu ị gaba azụ n'ụlọ.
Ihe ọ bụla ị na-ahọrọ ime na Switzerland, ị na-aga nwere oge nke ndụ gị. Dị na-echeta ka atụmatụ ihe omume gị, njem, na ogologo nke ọnụnọ nke ọma. Nke ahụ ga-hụ na gị na ezumike bụ hassle-free na ezi izuike, dị ka o kwesịrị.
Switzerland bụ a mara mma mba ọ bụla njem kwesịrị na-enweta. Ị dị njikere maka a 10 Days Switzerland njem? Book gị gbaa ụgbọ okporo ígwè ugbu a ka onwe gị-ekpochapụ unu site mma!
Ị chọrọ Embed anyị blog post “10 Days Switzerland Travel njegasi” na na gị na saịtị? ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F10-days-switzerland-itinerary%2F%3Flang%3Dig- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)